Umaki: imiklomelo | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 1, 2016 Douglas Karr
Le vidiyo yomklomelo we-spoof imnandi. Amahlaya amahle kakhulu abukeka njalo asuselwa ekwethembekeni, futhi ukuhanjiswa kwemiklomelo ngokuqinisekile kuyahlekisa. Angiyona imiklomelo yokuhlanganisa ndawonye; Ngikholwa ukuthi ukuqashelwa kwemboni kubalulekile. Inikeza ubufakazi begunya lakho futhi yakhe ukuqaphela kuzithameli ezifanele kakhulu. Sine-ejensi yezobudlelwano bomphakathi engakholeki esisebenza nayo. Bagcwele izandla zethu, bexosha umkhiqizo wethu (lokhu kushicilelwa) njengesisetshenziswa, ukumaketha kwethu kwedijithali